ချစ်ခင် ရတဲ့ ညီလေး တစ်ယောက် လူထု လှုပ်ရှားမှု မှာ ပါဝင်ရင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ အတွက် စိတ်ထိခိုက် ဝမ်းနည်းနေတဲ့ G FATT – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ချစ်ခင် ရတဲ့ ညီလေး တစ်ယောက် လူထု လှုပ်ရှားမှု မှာ ပါဝင်ရင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ အတွက် စိတ်ထိခိုက် ဝမ်းနည်းနေတဲ့ G FATT
ချစ်ခင် ရတဲ့ ညီလေး တစ်ယောက် လူထု လှုပ်ရှားမှု မှာ ပါဝင်ရင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ အတွက် စိတ်ထိခိုက် ဝမ်းနည်းနေတဲ့ G FATT
အဆိုတော် G Fatt ကတော့ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပြည်သူတစ်ဦး အနေ နဲ့ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ရက်ဆက် မမောနိုင် မပန်းနိုင်အောင် လမ်းပေါ်ထွက်ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေရုံတင်မကဘဲ အရေးကြီးတဲ့ အချိန်တွေမှာလည်း Defense Team မှ လူငယ်တွေ နဲ့အတူ ရှေ့ဆုံးက နေထွက်ကာ ကာကွယ်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင် မိနစ်ပိုင်းလောက်ကလည်း G Fatt ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတစ်ခုရေးသား ဝေမျှပေး ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ဒီကနေ့မှာဘဲ ချစ်ခင်ရတဲ့ ညီလေးတစ်ယောက် ကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့အတွက် စိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းနေပြီး သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကို ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ” သွားနှင့်​တော့ ညီ​လေး​ ဖီဖီ​ရေ . ၁၆ /၃ အတွက်ငါဂုဏ်ယူတယ်ညီ​လေး ။ အထက ၂ သပိတ်​ကြောင်းတူတူထွက်ဖူးတဲ့ညီ​လေး … မင်းအစ်ကို ခင်ရှင်းလေး​တော့ ​ပေါက်ကွဲ​နေ​ရော့မယ်ကွာ ..ခင်ရှင်းလေး​ရေ ကိုကြီးတို့ မင်းညီအတွက်အဆုံးထိတိုက်မှာပါကွာ မင်းဘယ်​လောက်နာကျင်​နေမလဲ ငါခံစား မိပါတယ် စ​တွေ့တည်းက တက်ကြွပြီး ရိုးသားတဲ့ညီငယ်​တွေနဲ့ အတူတူ ရုန်းခွင့်ရတာ ငါဂုဏ်ယူပါတယ် ဒီ​​နေ့​တော့ ငါ ငိုင်ကျသွား​တော့တာပါပဲကွာ .. ငါတို့မင်းအတွက် တာဝန်​ကျေ​စေရမယ်ညီ​လေး ..
ဒီအ​ရေး​​တော်ပုံမှာ မင်းရိုက်​ပေးတဲ့ဓါတ်ပုံ​တွေငါတင်ဖူး​ပေါ့ကွာ ..ထ၂ သပိတ်​​ကြောင်း မှာ မင်း​ရှေ့က ​ပြေးလိုက်ပုံရိုက်လိုက် ငါမျက်လုံးထဲကမထွက်ဖူးကွာ .. မင်းက ၁၆ရပ်ကွက်ရဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ သူရဲ​ကောင်းပါညီ​လေး ငါဦးညွှတ်ပါတယ် ။ ကျန်တဲ့ညီ​တွေလဲ ​နောက်​နေ့​တွေဂရုစိုက်ပါကွာ ငါတို့ထပ်မ​ပေးပါ​ရ​စေနဲ့​တော့ ငါလည်း ဘာ​ပြောရမှန်းကိုမသိ​တော့ပါဘူးကွ ငါရပ်ကွက်ထဲအတူမရှိ​ပေးနိုင်ခဲ့တာ ​တောင်းပန်ပါတယ်ကွာ ။ ငါတတ်နိုင်တာ အကုန်ဝင်ကူပါ့မယ် ကွာ ။ #အာဏာရှင်စနစ်ကျဆုံးပါ​စေ ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီသတင်းလေးကိုတစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
အဆိုေတာ္ G Fatt ကေတာ့ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ျပည္သူတစ္ဦး အေန နဲ႔ တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ မေမာႏိုင္ မပန္းႏိုင္ေအာင္ လမ္းေပၚထြက္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေန႐ုံတင္မကဘဲ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာလည္း Defense Team မွ လူငယ္ေတြ နဲ႔အတူ ေရွ႕ဆုံးက ေနထြက္ကာ ကာကြယ္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ မိနစ္ပိုင္းေလာက္ကလည္း G Fatt ရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမွာ စိတ္မေကာင္းစရာသတင္းတစ္ခုေရးသား ေဝမွ်ေပး ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါကေတာ့ ဒီကေန႔မွာဘဲ ခ်စ္ခင္ရတဲ့ ညီေလးတစ္ေယာက္ က်ဆုံးသြားခဲ့တဲ့အတြက္ စိတ္ထိခိုက္ဝမ္းနည္းေနၿပီး သူနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အမွတ္တရေလးေတြကို ေရးသားထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ” သြားႏွင့္​ေတာ့ ညီ​ေလး​ ဖီဖီ​ေရ . ၁၆ /၃ အတြက္ငါဂုဏ္ယူတယ္ညီ​ေလး ။ အထက ၂ သပိတ္​ေၾကာင္းတူတူထြက္ဖူးတဲ့ညီ​ေလး … မင္းအစ္ကို ခင္ရွင္းေလး​ေတာ့ ​ေပါက္ကြဲ​ေန​ေရာ့မယ္ကြာ ..ခင္ရွင္းေလး​ေရ ကိုႀကီးတို႔ မင္းညီအတြက္အဆုံးထိတိုက္မွာပါကြာ မင္းဘယ္​ေလာက္နာက်င္​ေနမလဲ ငါခံစား မိပါတယ္ စ​ေတြ႕တည္းက တက္ႂကြၿပီး ႐ိုးသားတဲ့ညီငယ္​ေတြနဲ႔ အတူတူ ႐ုန္းခြင့္ရတာ ငါဂုဏ္ယူပါတယ္ ဒီ​​ေန႔​ေတာ့ ငါ ငိုင္က်သြား​ေတာ့တာပါပဲကြာ .. ငါတို႔မင္းအတြက္ တာဝန္​ေက်​ေစရမယ္ညီ​ေလး ..
ဒီအ​ေရး​​ေတာ္ပုံမွာ မင္း႐ိုက္​ေပးတဲ့ဓါတ္ပုံ​ေတြငါတင္ဖူး​ေပါ့ကြာ ..ထ၂ သပိတ္​​ေၾကာင္း မွာ မင္း​ေရွ႕က ​ေျပးလိုက္ပုံ႐ိုက္လိုက္ ငါမ်က္လုံးထဲကမထြက္ဖူးကြာ .. မင္းက ၁၆ရပ္ကြက္ရဲ႕ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရဲ႕ သူရဲ​ေကာင္းပါညီ​ေလး ငါဦးၫႊတ္ပါတယ္ ။ က်န္တဲ့ညီ​ေတြလဲ ​ေနာက္​ေန႔​ေတြဂ႐ုစိုက္ပါကြာ ငါတို႔ထပ္မ​ေပးပါ​ရ​ေစနဲ႔​ေတာ့ ငါလည္း ဘာ​ေျပာရမွန္းကိုမသိ​ေတာ့ပါဘူးကြ ငါရပ္ကြက္ထဲအတူမရွိ​ေပးႏိုင္ခဲ့တာ ​ေတာင္းပန္ပါတယ္ကြာ ။ ငါတတ္ႏိုင္တာ အကုန္ဝင္ကူပါ့မယ္ ကြာ ။ #အာဏာရွင္စနစ္က်ဆုံးပါ​ေစ ” ဆိုၿပီး ေရးသားထားတာပဲ ျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္ေတြအတြက္ ဒီသတင္းေလးကိုတစ္ဆင့္ျပန္လည္ ကူးယူတင္ဆက္ေပးလိုက္ ရပါတယ္ေနာ္။
Previous post အခုလို ချိန်မှာ အလှူ ရှင် မရှိတာ ကြောင့် ကလေး အယောက် (၅၀) ကျော် တွက် စားရေး သောက်ရေးပါ ခက်ခဲ နေရတဲ့ မိဘ မဲ့ ဂေဟာလေး
Next post ခင်မင်ရင်းနှီးရ တဲ့ မိတ်ဆွေ တွေ နဲ့ အတူ စုပေါင်းပြီး အိမ်ထောင်စု (၁၀၀) ကျော် အတွက် ဆန်နှစ်ပြည် နဲ့ ဆီတစ်ဗူးစီ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ စူးရှထက်